ForexMT4Systems - Download Isticmaalo Bilaash ah oo bilaash ah iyo Tilmaamaha MT4
Kala Hantid Istaraatiijiyada lacag la'aanta ah iyo Tilmaamaha MT4
Nidaamka Ganacsi ee Forex
Istaraatijiyada Bollinger Bands Strategs
Istuudiyadaha Istuudiyanka ah ee Istuudiyaanka
Istaraatiijiyada lacagta ee 'Forex Breakout'
Istaraatijiyadaha Hantidhowrka ee Forex
Istaraatiijiyada Xawaaladaha ee Pivot Point
Taageerada iyo Dib-u-habeynta Istaraatiijiyada Xawaaladaha
Istaraatijiyada Istaraatiijiga ah ee Xawaaladaha
Isbedel Istaraatiijiyadaha Xawaaladda
Istaraatijiyadaha isdhaafsiga ee isdhaafsiga
Istaraatiijiyada ikhtiyaaraadka ikhtiyaarka ah
Tilmaamaha ikhtiyaarka ikhtiyaarka ah
Nidaamyada Forex MT4 Waxay Kuugu Dhameeyaan 2018!
Waa maxay Istaraatijiyadda Ganacsi ee Ganacsi?
A Istaraatijiyad ganacsi ee forex waa farsamo loo isticmaalo ganacsade caan ah si loo go'aamiyo in la iibsado ama la iibiyo lacag lacageed wakhti kasta. Istaraatiijiyada Ganacsiga Ganacsi ee Forex ayaa ku saleysan falanqayn farsamo, falanqeyn qariirad ama aasaas u ah, dhacdooyinka wararka ku saleysan Istaraatijiyada Ganacsiga Ganacsadaha Sarrifka ah ee Ganacsadaha ayaa badanaa laga soo iibiyaa calaamado ganacsi oo kiciya iib ama iibiya go'aamada. Tani waxay muujinaysaa in ay ku habboonaan karaan ganacsade ama iibiye, khidmad gaar ah. Istaraatijiyad horumarineed waxay ku imaan kartaa qaab nidaamsan oo nidaamsan nidaamka ganacsiga.
Istaraatijiyada ganacsi ee ganacsiga waxay ku lug leedahay ganacsade leh hannaan horey loo dejiyey ama shuruud ah in uu u baahan yahay inuu korsado iyada oo ku saleysan sicirka / tusaalaha tilmaamaya, inta uu ku fadhiyo kombuyuutarkiisa si uu u sugo siyaabahan oo kale horumarinta. Ganacsato badan ayaa isticmaala tusayaasha farsamada si loo horumariyo nidaamyadooda. Ganacsadaha ayaa looga baahan yahay inuu macne u sameeyo qaab-dhismeedka isagoo turjumaya in uu yahay iib ama feejignaan iibsi. Istaraatiijiyada Awoodda ah Istaraatijiyad isdabajoog ah, dhinaca kale, waa algorithm oo leh xeer ama shuruudo dejis ah, oo kaddibna lagu dhajiyay software, oo loo yaqaano robot forex (EA). Nidaamyada badankood waa kuwo loogu talagalay mashiinka ganacsiga Metatrader 4 (MT4). Waxaa lagu xiri karaa jadwalkaada, sidaas awgeedna ku shaqeynaya magacaaga - waa mid awood u leh inuu bilaabo iibsashada ama iibinta amarada ganacsadaha. Xaaladaha badankood, ganacsiga baabuurta ah ayaa la sheegay in la tirtiro dhinaca bani-aadamka ee cilmi-nafsiga kuwaas oo si aad ah u burburinaya ganacsiga suuqyada ganacsiyo badan.
Istaraatijiyada Ganacsiga ee lacag la'aanta ah
Marka aad dooratid nooca ceymiska ganacsiga ee forex ee isticmaala, waxaad leedahay laba ikhtiyaar:
Adiga ayaa iska bixinaya
Waxaad isticmaali kartaa istaraatijiyada ganacsiga bilaashka ah oo lacag la'aan ah ee ku yaal meeshan iyo tijaabi.
Dhibaatada nidaamka ganacsi ee lacagta lagu bixiyo ayaa ah:
Waxaad ku isticmaali kartaa lacag badan oo ku saabsan iibsashada istaraatiijiyada ganacsiga ganacsiga ee aan ku habooneyn qaabka ganacsigaaga.
Ka dib markaad lumiso xadka aad ogtahay inuusan ku habooneyn shakhsiyadaada ganacsiga si aadan u isticmaali doonin marka ugu horeysa ee aad jeceshahay inaad xirato. Qashinka lacagta.
Istaraatijiyada ganacsiga bilaashka ah ee Forex:
Waxaad haysataa fursad aad ku tijaabin kartid iyaga oo aanad bixin iyaga oo ugu danbeyn raadsan nidaam ganacsi oo kugu habboon.
Istaraatijiyada ganacsiga bilaashka ah ee Forex ganacsiga ayaa lacag ka dhigi kara Forex.
Iyadoo maskaxda lagu hayo, website-ka Forex wuxuu leeyahay boqolaal Istaraatijiyada ganacsiga ee Forex waayo, dhammaan baayacmushtariyaasha, iyo kuwa baayacmushtarkaaga ka shaqaysta,
Forex Scalping Istaraatijiyad loogu talagalay in lagu shaqeeyo waqtiyada ugu hooseysa sida 1-daqiiqo iyo waqtiga 5-daqiiqada, waa istaraatiijiyada ganacsiga ganacsiga. Istaraatiijiyada ganacsiga ganacsiga ee Forex ayaa loogu talagalay in lagu sawiro suuqyada faa'iidooyinka yar yar ee ganacsi kasta oo la geliyo, tusaale ahaan pips 5, pips 10 ama laga yaabo in faa'iidada pips 15. Maxay istiraatijiyadaani waxay tahay in ay dib-u-soo-saarto xirfadahan oo kale inta lagu jiro fadhiga ganacsiga, taas oo keenaysa guulo waaweyn marka lagu daro. Waa kuwan liiska nidaamyada habka kor u qaadista on this site:
Nidaamka Dhiirrigelinta ee Forex Doske
Nidaamka Ganacsi Lacageed ee Xawaaladda
Nidaamka Sarrifka Ganacsi Lacageed ee Superx
Istaraatijiyada Istaraatiijiyada ee MTF Stochastic MTF
Istaraatijiyad Sarrifka Sare ee RSI
Istaraatijiyad Beddelka Sicirka ah ee Xisaabaadka CCI
Maxay Tahay Macaamiishu?
Xawaaladda Forex waa farsamada ganacsiga maalintii oo ganacsade Forex uu fuliyo ganacsiga iyo ka baxitaanka daqiiqadaha ama ilbiriqsiyada kiisaska qaarkood. Sidaa darteed, marka aad ka ganacsade ah forex ganacsade, ma aad raadinayso bartilmaameed faa'iido weyn, waxaad raadinayso bartilmaameed faa'iido yar oo ganacsi sida pips 5, pips 1o ama xines 15. Oo waxaad isku dayeysaa inaad qaadato xirfado badan inta lagu jiro fadhiga ganacsiga iyada oo la bartilmaameed badan yahay. Haddaba waa maxay 'barta Forex ka dibna? Waa hagaag, halkan waa wax: yoolka Miisaanka FX waa inuu sameeyo ganacsi badan inta lagu jiro fadhiga ganacsiga oo rajaynaya in dhamaadka, dhammaan faa'idooyinka yaryar waxay ku dari doonaan oo ka badnaan doonaan khasaaraha ganacsiga ee la galay ganacsiga). Badeeco badan oo Forex ah ma jecla ganacsiga Forex sababta oo ah ma arkaan wax dhibco ah oo u socdo faa'iidooyin yar oo yar oo ku lug leh nooc noocaas ah ee ganacsiga cadaadiska sarreeya. Laakiin waxa qosolka ah waa hareerahani waa ganacsade badan oo ka dhigaya Forex dhiska. Haddii aad xiiseyneyso, bogga internetka ee forex ayaa sidoo kale leh istaraatijiyado isdaba-joog ah oo aad ku hubin kartid oo isku day inaad doorato adigoo riixaya halkan.
Xogta Ganacsi ee Forex Money News
Waraysiga ganacsiga wuxuu noqon karaa mid faa'iido leh oo aad u khatar badan. Haddii aadan ogeyn waxaad samayn lahayd, ha iibsan warka. Waxaad tirtiri kartaa xisaabtaada ganacsi gudahood dhowr ilbiriqsi daqiiqado gudahood, sababtoo ah sicirka ayaa kugu soo kici kara adiga si dhakhso ah ayaa lagugu xirayaa. Laakiin haddii aadan isticmaalin Istaraatiijiyada ganacsiga ee Forex news ka dibna maalintaa, ugu fiican ee la hubo maalin kasta ka hor intaadan ganacsiga ka bixin wararka waaweyn ee dhaqaalaha ee la qorsheeyay in la baxo ka dibna go'aan ka gaadho haddii aad sugto ilaa warka la sii daayo ka dibna ganacsiga ama sugaayo kaliya maalin kale.
(Aasaasiga ah) Istaraatijiyada Ganacsi ee fudud ee Forex Trading For Beginners
Haddii aad tahay bilaw, adigoo haysta istaraatijiyad ganacsi oo kakan oo horumar leh ayaa isku khilaafi doona jebintaada. Qaado waqtigaaga! Waxa aad u baahan tahay waa inaad ka bilawdo istaraatiijiyada ganacsiga ganacsiga aasaasiga ah iyo inaad ka shaqeyso halkaa. Kuwani waa istaraatiijiyado ganacsi oo fudud. Noqoshada a istaraatijiyad ganacsi oo aasaasi ah micnaheedu maaha inay noqonayaan nidaam ganacsi oo aan faa'iido lahayn. Halkaan fudud waxaa loola jeedaa in qawaaniinta ganacsiga ee istiraatajiyadaha ganacsiga ee Forex ay aad u fududahay in la fahmo oo la fuliyo markaad ganacsi sameyneyso. Ma jiraan shuruudo badan ama qawaaniin badan oo kugu wareersan. Taasina waa sababta ay kuwan u yihiin hababka forex ganacsi ee loogu talagalay kuwa bilowga ah. Kuwani waa nidaamyo ganacsi oo fudud oo loogu talagalay kuwa bilowga ah ee bilaabaya ganacsiga forex. Ahaanshaha fudud macnaheedu maaha in istaraatiijiyadan caaraduhu aanay faa'iido lahayn. Sida xaqiiqda ah, nidaamyada ganacsiga fudud ee fudud ee aad u fudud ayaa la isticmaali karaa waxayna noqon kartaa wax faa'iido leh. Marka aad hesho mishiinka, ka dibna waxaad bilaabi kartaa inaad hormarisid nidaamyada ganacsi ee forex ama aad u guurto istaraatiijiyado ganacsi oo horey u socda iyo xitaa xeeladaha qiimaha ganacsiga. Haddii aad tahay ganacsade forex trader, dhab ahaantii ma rabto in aad isku kalsoon tahay naftaada oo dhan waxyaabaha kale oo dhan ... kaliya helitaanka nidaam ganacsi forex fudud iyo demo ganacsi dibadda ah. Waxa aad ka heli doonto waa in nidaamka ganacsiga fudud ee ugu fudud ay yihiin kuwa lacagta samayn kara. Raadi, raac oo ku dadaal sidii ay kuugu shaqeyn lahayd adiga oo raacaya sharciyadeeda ganacsi iyada oo la maareynayo maareynta khatarta ganacsiga. Action Price Qiimeeynta qiimaha ficilku waa falanqayn falanqayn farsamo oo la adeegsanayo ficilada shamuuska, qaababka sawirka, taageerada iyo heerarka iska caabida si ay u fuliyaan amarada. Si aad u noqotid ganacsi qiimo sare leh, waxaad u baahan tahay inaad faham buuxa u leedahay sida aragtida qiyaasta qiimaha iyo sida loo iibsado waqtiga dhabta ah. Waa kuwan liiska nidaamyada ficilka qiimaha qiyaasta on this site:
Istaraatiijiyada Ganacsiga Ganacsi ee Shirkadda 'Forex Price Action'
Istaraatiijiyada Ganacsiga Dibadda ee Taageerada Xawaaladda
Istaraatijiyada Ganacsiga Ganacsi ee fudud ee qiimaha ganacsiga
Istaraatijiyada Hagaajinta Xawaaladda ee EMAS
Istaraatijiyad Sicir Lacagta ah ee Fikradda ah
Istaraatijiyadda Isticmaalka Beddelka ee Qiimeeynta Ganacsiga
Shaxda Sicirka Lacagta ah ee Px
Arimaha aasaasiga ah ee Istaraatiijiyada Ganacsi Lacageed
Maxay tahay istaraatiijiyada Ganacsiga ganacsiga ee Forex? Istaraatijiyad ganacsi oo loogu talagalay waa fududeeyaa qawaaniin kuu sheegaya markaad gadato ama iibiso marka shuruudaha suuqa qaarkood la buuxiyo si loo helo faa'iido. Istaraatiijiyad ganacsi ee tartiib tartiib ah waa inuu lahaadaa xuubyadan 4 laakiin waxyaabaha aasaasiga ah:
Xaaladaha (yada) ay tahay inay kugu kiciyaan inaad iibsato ama iibiso.
meesha laga yaabo inay meel dhigto amarkaaga joogsiga joojinta,
meesha ay kudhacdo bartilmaameedka
iyo nidaamku waa inuu leeyahay xeerar ku saabsan sida loo maareeyo ganacsiga.
Taasi waa qeexida waxa ah istaraatiijiyada ganacsiga forex trading. Haddii aa nidaam ganacsi oo aan lahayn mid ka mid ah qodobada muhiimka ah, waxaa lagaa rabaa in lagaa jahwareeriyo fulinta. Si fudud loo dhigo, sicirka suuqa waxaa loo sheegi karaa inuu yahay fowdo. Si aad u hesho amar suuqa suuqa, waxaad heshay sharciyo.
Kheyraadka Istaraatiijiga ah ee Forex
Waxaa sidoo kale jira waxyaabo kale oo badan Istaraatijiyadaha suuqa Forex ee boggan shabakadda ee Forex kaas oo ay ka mid yihiin:
fiidiyowyada ganacsiga ee forex
talooyinka ganacsiga ee forex
Istaraatiijiyada Ganacsi ee Ganacsiga ee Ganacsiga ah
Ganacsade kasta oo forex ah waa ka duwan yahay ... waxa aad jeceshahay ma aha waxa aan jeclahay. Waxa aad u malaynayso in ay tahay istaraatijiyad ganacsi ee ugu fiican Forex ma noqon doonto isla. Su'aashan ayaa looga tagayaa ganacsade kasta ee Forex. Waxaad u baahan tahay inaad hesho istaraatijiyada ganacsiga ganacsiga ee Forex ee ku habboon shakhsiyadaada ganacsigaaga iyo markaad sameysid ... markaa taasi waxay noqon doontaa istaraatijiyad ganacsi ee ugu wanaagsan ee ku habboon (fekerkeyga). Sidaa darteed, haddii aad raadineyso Istaraatiijiyada ganacsiga ee Forex ee shaqeeya, kaliya uun fahamsanahay in hal nidaam uusan shaqeyn karin dhammaan. Waxaa laga yaabaa inaan jeclaado ganacsiga ganacsiga qiimaha, laakiin waxaad jeclaan lahayd inaad isticmaasho tusmooyinka nidaamka ganacsigaaga. Waxaad u baahan tahay inaad baaritaan ku sameyso oo aad tijaabiso oo aad ogaato nooca qalabka ganacsiga ee forex ee ganacsiga iyo nidaamyadu u shaqeeyaan si fudud sababtoo ah jidh walba waa ka duwan yahay. Waxaan jeclaan lahaa inaad ka fekerto dhaqdhaqaaqa qiyaasta istiraatiijiga ah ee ganacsiga, waxaa jira waxyaabo badan oo ka mid ah boggan. Haddii aad jeceshahay inaad xayeysiiso xeeladaha ganacsiga ee Forex, waxay halkan u joogaan. Haddii aad jeceshahay xeeladaha ganacsiga wararka, waxay halkan u joogaan. Haddii aad jeceshahay xeeladaha dayactir maalmeedka iyo nidaamyada, waxaa jira halkan. Haddii aad jeceshahay xeelado ganacsi iyo nidaam ganacsi, istiraatiijiyado fara badan halkan waa nidaam ganacsi oo isdaba jooga. Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa mid aad jeceshahay oo aad sameysato istaraatiijiyada saldhigga ganacsiga ee Forex u shaqeyso. Ama haddii aadan ka helin nidaamka Forex ee aad jeceshahay laakiin waxaa jira mid aad "nooc oo kale ah" laakiin weli ma fiicnayn..waa sababta aan u barbar dhigin? Waa maxay sababta aan u badalin iyada oo la isku darayo dhawr farsamooyin ganacsi oo kala duwan ama fikrado "nidaamkan ganacsiga" iyo "nidaamka ganacsiga" kadibna samee nidaam ganacsi oo aad ku qanacsan tahay? Qofna kuma joojin doono. Hadda, yaa sheega in ka dib markii aad heshay Istaraatiijigaaga Forex ee aad jeceshahay ... maxaad samayneysaa? Waa hagaag, xisaab furan oo xisaab furan oo ganacsade ah oo ka baaraandegga Forex oo tijaabi nidaamka si aad u aragto sida ay u shaqeyso xaaladaha suuqa ee dhabta ah. Taasi waa sida kaliya ee aad u ogaato sida nidaamka ganacsiga forex ugu shaqeyn doono. Dhammaan xeeladaha ganacsiga iyo nidaamyada ayaa laga yaabaa inay si fiican u eegi karaan boggaan laakiin haddii aad jeceshahay nidaamka ganacsiga, waxaad dhab ahaantii u baahan tahay inaad tijaabiso. Kadib markaad ku qanacsan tahay, markaa waxaad bilaabi kartaa ganacsi lacageed. Tani waa meesha uu kufilan yahay bilaabmid ... ganacsi lacageed leh. Imisa xayeysiin ganacsi oo aad u baahan tahay? Haddii aad doorbideyso inaad ka ganacsato hal nooc oo ganacsi ah, markaa waxaad u baahan tahay kaliya nidaamka ganacsiga forex. Laakiin haddii aad jeceshahay in aad ganacsi kala duwan suuqa kala iibsatid, kadibna dhowr nidaam ganacsi oo adag ah ee mid kasta oo ka mid ah xaaladaha suuqa kala duwan ayaa lagama maarmaan ah. Tusaale ahaan Forex:
haddii suuqa uu ku jiro xaalad, ka dibna waxaad isticmaali doontaa nidaam ganacsi oo isbeddel ah
haddii suuqa uu ku xiran yahay ama kala duwan yahay, waa inaad isticmaashaa nidaam ganacsi oo kala duwan
haddii suuqu u socoto kaalmo weyn ama heerarka iska caabida, waxaa laga yaabaa inaad u bedesho isticmaalka nidaam ganacsi oo iska caabin ah iyo iska hor imaad ah.
Sidaas oo ay dhabtii ilaa ilaa trader ganacsade inay go'aan ka. Haddii aad tahay ganacsade forex traders, waxaan kuu soo jeedinayaa inaad kaliya hal qaado forex ganacsi oo ku dhegan.
Ganaaxa ganacsiga iyo Maalgashiga Maalinta?
Ganacsade kasta oo qashinka ah wuu ka duwan yahay. Qaar ka mid ah waxay jecel yahiin ganacsiyada ganacsiyadoodu wakhtigooda gaaban iyo ganacsiyadoodu waxay u furan yihiin waqtiyo gaaban taasoo macneheedu yahay farsamada ganacsiga maalgashiga maalinlaha ah ee noo yimaada. Laakiin markaa waxaa jira ganacsatada tartiib tartiibka ah ee ganacsatada liidanaya ... Ganacsadaha suuqyadu waa kuwa ganacsatada ah ee ganacsiga u qaada oo haysta aragti dhexdhexaad ah ama mustaqbalka fog. Taas macnaheedu waa in ganacsiga la furi karo oo laga yaabo inuu qaato maalin ilaa toddobaad ama bilo kahor inta aan ganacsiga la xirin. Ganacsatada suuqyada ah waxay jecel yihiin in ay sugaan ganacsiga si ay u ciyaaraan ... ilaa iyo inta ay qaadan karto waxay ku xiran tahay ficilada qiimaha iyo dhaqdhaqaaqa suuqa. Faa'iidada ganacsiga suuqyada sidaas darteed waa xaqiiqda ah, dhammaan qiimaha sicirka qiimaha yar ee wakhtiyada yar yar (taas oo ah saamilaha ganacsadaha maalintii) waa la iska indho-tiraa oo aragti dheer oo dheer ayaa lagu qabtaa ganacsiga kasta ee la dhigo. Faa'iidada ganacsiga suuqyada sidaa darteed waa kuwan:
Khasaaradaha la qabto maalmo, toddobaadyo iyo bilo ayaa macnaheedu yahay faa'iido badan
Qaylo-dhaanta qiimaha yaryar waa mid aan quseyn
Xirfadaha waxaa badanaa lagu soo galaa meelaha dhibcood, kuwaas oo inta badan, waxay keeni karaan khatar aad u hooseeya, sare u qaadida dhibcaha ganacsiga.
Waxa kaliya ee faa'iido weyn u leh ganacsiga suuqyada ayaa mararka qaarkood lagaa rabaa in aad sii wadid ganacsiga xitaa marka uu kor u kacayo qiimaha kor u kaca sida uu ugu hogaaminayo bartilmaameedkaaga. Faa'iidooyinka maalinta ganacsiga waa kuwaan:
faa'iidada ama lumitaanka la ogaaday muddada gaaban ee maalintii.
Fursado badan oo ganacsi ayaa laga heli karaa inta lagu jiro maalinta.
Dhibaatooyinka ganacsiga maalintii waa kuwan:
faa'iido yar oo ganacsi kasta
suurtogal u ah in ganacsigu ka badan yahay
cadaadis sare iyo jawi ganacsi oo halis ah waxayna ubaahan tahay in ay noqoto feejignaan joogta ah oo lagu sawirayo jaantusyada ganacsigaaga si ay u dejiyaan.
Maqnaanshaha sidoo kale waa qaab aad u gaaban oo ka mid ah ganacsiga maalintii ... waxay qaadataa daqiiqo ama ilbiriqsi si aad u furto ganacsiga.
Saacadaha ugu Fiican ee Lacagta Ganacsiga ah?
Fikrado way kala duwanaan karaan, laakiin hal shay ayaa hubaal ah ... wuxuu aad u fududahay inuu lacag u sameeyo ganacsiga suuqa miyiga marka suuqa suuqu uu leeyahay isbedel iyo kacsanaan. Marka sidaas la yeelo, ganacsatada badmaaxiinta ah waxay jecel yihiin in ay ka ganacsadaan suuqyada lafaha inta lagu jiro fadhiga London iyo fadhigaaga cusub. Kulanka London Forex waa halkaasoo mugga weyn ee qandaraaska forexaad lagu sameeyo maalin kasta oo la raaco soo socota fadhigaaga cusub. In fadhiga Asian Forex trading, waxaa badanaa lagu gartaa qiyaasaha khafiifka ah inta lagu jiro maalinta. Waxa ugu fiican ee fekerkeyga ah in aan ganacsiga ku galo inta lagu jiro saacadaha fx London ama inta lagu jiro fadhigaaga ganacsiga ee New Forex.
Our Laguugu talagalay Tusaha Xawaaladaha MT4 ka soo uruurinta:
tilmaamayaasha ganacsiga maalintii
Muujiyeyaasha celceliska heerka
Suuqyada ugu Habboon ee Ganacsiga?
Doorashada lamaanaha lacagta lagu iibsado waa mid aad muhiim u ah. Taasina waa sababta:
Qaar ka mid ah lamaanaha lacagta ma si fiican u socdaan
qaar ka mid ah labada lamaane oo isbeddel ah ayaa si fiican u socda inta lagu jiro waqtiyada qaarkood inta lagu jiro maalinta, tusaale ahaan, London iyo casharka cusub ee ganacsigaaga.
Qaar ka mid ah labada lamaane waxay leeyihiin fara badan oo fara badan oo ka mid ah pips 3-5 leh qaar ka mid ah broters forex iyo haddii aad ganacsi halbeegga caadiga ah, taas oo qiyaastii $ 10- $ 50 khasaaraha isla markiiba ka dib markii aad soo gasho ganacsi iyo qiimaha waa in ay u guuraan by this badan jihada ganacsigaaga si aad u dhoofiso ganacsigaas.
Qaar ka mid ah labada lamaane waxay leeyihiin sifooyin aad u qallafsan taas oo macnaheedu yahay in ay u muuqdaan in ay soo baxayaan iyo haddii lumitaanka joogsigaagu aad u dhow yahay, waxaad joojin doontaa
Waxyaabaha Lacagta lagu soo Qaddimay:
Sababta Falanqaynta farsamadu waxay si fiican u shaqaysaa Suuqa Suuqa
Waa maxay sababta Forex waa fikrad wanaagsan oo maalgelin ku filan maalgashiga ama badeecooyinka
Waa maxay kala duwanaanshaha ganacsiga Mini Lottery Vs. Dhibco buuxa ee Forex
Fahmidda Ganacsi Ganacsi Lacageed
Suuq-geynta Ganacsiga Suuqa Suuqa
Faa'iidooyinka iyo Cunsuriyadaha, ee Ganacsi Lacageed Ganacsi Lacageed
Suuqa Suuqa iyo Hantidhowrka Karti Karista
Aragtida Elliott Wave In Forex Trading
Taageerada iyo Resistance ee Suuqa Suuqa
Takhaatiirta Nabadgelyo Si Loo Yaabsiiyo U Dhaqaajinta Xawaaladaha Lacagta
Istaraatijiyadaha iyo Farsamada Forex ee faa'iido leh
Qodobbada Miisaanka ee Forex: Qaadashada Shaxankaaga Waqtiga
Suuqa Dhaqaalaha ee Suuqa Suuqa
Maareynta Lacagta iyo Ganacsi Lacageed
Leonardo Fibonacci iyo Trading Forex
Qaar ka mid ah Qiimaha Hilibka ee Forex Trading?
The Ganacsi qaali ah oo ganacsiga Forex waa maareynta lacagta. Mararka qaar waxaa loo yaqaan "Managing Risk Management Trading". Waxaad middan xaq u leedahay adigoo anshax marinaya oo sameynaya waxa saxda ah iyo waxa aad arki doonto taas waa arrin kaliya oo ka hor inta aanad bilaabin inaad sameyso ganacsi lacag ah forex ganacsi. Maxaa loola jeedaa malaayiin lacag ah for Forex trading waa maareynta lacagta. Sidaas miyuu macno samaynayaa inaad ku koraan naftaada si aad u hesho xaqaan? Waxaad aragtaa, istiraatiijiyad ganacsi ee forex ganacsigu wuxuu ku siin doonaa 100% sicirka guusha. Midna. Marka ganacsiga la dhigo, natiijada aad rabto maahan damaanad qaadka maxaa yeelay ma xakamayn kartid qiimaha suuqyada iyo meesha ay sii socon doonto! Waxaad ku jirtaa naxariista xoogagga suuqyada iyo iibsadaha iyo iibiyeyaasha. Laakiin waxa aad xakameyn kartid waa RISK. Taasi waa waxa kaliya ee aad haysato kantarooli buuxda ganacsiga ... khatarta ganacsigaaga. Adiga ayaa go'aaminaya inta xisaabeed ee aad ku jirayso khatarta ganacsiga.
Noqo Ganacsi Ganacsi ah
Ganacsato badan ayaa sameeya oo luminaya lacago badan oo ganacsi ah Forex. Sababta oo ah sababta dareenka bani-aadmigu uu ku lug leeyahay ... Cagajuglayn iyo cabsiguna waa ciyaar. Marka lacagtaada dhabta ah ay ku taal khadadka, waxaad isku dayi lahayd inaad sameyso waxyaabo aanad waligeed sameynin intaad kuxirin lahayd ganacsiga. Diidmada badan ee ganacsiga iyo lacag badan oo "hadda" waa mid ka mid ah dilaaga ugu weyn ee Forex trading accounts. Dhamaantood waxay hoos yimaadaan si ay u xakameeyaan loona maamulo khatartaada. Dhibaatadaas oo aanad sii dheeraan doonin ganacsiga forex online.
Ma dhigi kartaa lacag Ganacsi lacag ah?
Haa iyo Maya. Tani ma aha jawaab la yaab leh. Xaqiiqdii waad ka dhigi kartaa lacag. Sidoo kale waxaad lumin kartaa lacag badan. Qarsoodi ah in lacag lagu sameeyo ganacsiga forex waa maareynta khatarta ganacsigaaga iyo inaad hesho istaraatijiyad ganacsi forex ee ku haboon. Wax walba oo kale waa mid aan ku habboonayn. Haddii aad xakamayn karto dareenkaaga oo aad maamuli karto khatartaada ganacsiga, waad fiicnaan doontaa. Haa, haddii aad maamuleyso khatarta ganacsigaaga iyo haysato kubad bir ah ... Dhab ahaan, waxaad noqon kartaa faa'iido leh haddii aad tirtirto waxyaabahan caqabada ganacsiga forex ganacsiga sida:
ee aan raacin xeerarka nidaamka ganacsiga forex trades
maaha inaad raacdo qorshaha maamulka ee khatarta ganacsiga ee aad lahayd.
ma sugin qorshaha ganacsi ee saxda ah in ay dhacaan ka hor intaanad qaadan ganacsiga maxaa yeelay waxaad ku jirtaa "rush" si aad u qaadato ganacsi
Waxyaabahaas oo kaa dhigi doona ganacsade Forex aan faa'iido lahayn oo aad lumiso lacag badan haddii aan la kontoroolin. Waxaa jira hadal "Waxaan arkay cadowga ... iyo aniga." Tani waa mid aad uwanaagsan ganacsiga Forex. Waxaad tahay cadowgaaga ugu xun marka ay timaado ganacsiga Forex. Haddii aad tahay ganacsade cusub, waxaad arki doontaa sidan oo waxaan u maleynayaa inaan been sheegayo ... Laakiin sug ilaa inta aad ganacsiga dhabta ah ku iibsaneyso muddo yar oo aad ogaan doonto waxa aan idhaahdey run. Intee in le'eg ayaad halis u tahay ganacsiga? Waxaa jira dugsiyo badan oo feker ah oo ku saabsan inta halistu halis u tahay ganacsiga. Laakiin xasuuso tan: haddii aad halis ugu jirtid koontadaada hal ganacsi, ma qaadan doonto muddo dheer ka hor intaadan tirtirin xisaabtaada ganacsiga forex ganacsiga, laakiin dhinaca kale, waxaad samayn kartaa lacag badan haddii ganacsigu saxan yahay. Hase yeeshee, waxaad u ganacsantahay forex mudo dheer, waxay macno buuxda u leedahay in aad halis u yeelatid boqolkiiba yar ee koontadaada ganacsiga ee ganacsi kasta. Sababtuna waa mid sahlan: waxay qaadanaysaa laydh aad u badan si ay u qariyaan xisaabta ganacsiga forex dhaqaale. Haddaba waa maxay khatarta ugu wanaagsan? Waxaan ku dhajin lahaa 1-2% xisaabtarkaaga ganacsi kasta. Xitaa waxaad xitaa kor u qaadi kartaa khatarta 5% hal ganacsi. Laakiin xusuusnow, iyada oo 5% halista ganacsiga, waxay dhammaanteed qaadanaysaa waa 20 oo isku xigta oo lumiya ganacsiga iyo xisaabtaada ayaa la tirtiri doonaa. Inta badan waxaad halis ugu jirtaa inaad lumiso ama waxaad sii badan kartaa. Waxaad ku ciyaareysaa khatarta maareynta khatarta ah isla markaana waxaad sameyn kartaa tone oo lacag ah forex ganacsi.
Talo-bixinnada Talo-Qodobbada Talo:
Waxyaabaha Aad U Baahan Tahay Intaadan Furan Xisaab Furan
Waxyaabaha Aad Ka Fiirsaneyso Inta Aan Maalgelin In Forex
Suuqa Suuqa: Suuqa Ganacsiga
One Way Wanaagsan Si Looga Joojiyo Maalmaha Maalinta ee Ganacsi Lacageedka Sicirada Suuqa
Sameyso Lacagta Ganacsi ee Ganacsi u Isticmaalaya Isticmaal la'aanta
Learn Forex Trading - Sida Loo Abuuro Dakhliga By Forex Trading Waqtiga Waqti Qalabka Guriga
Sida Loo Isticmaalo Nafaqada Natiijooyinka Weyn Lahaanshaha Forex
Sida Loo Akhriyo Shaxda Forex: 5 Waxyaabaha Aad Baahan Tahay
Sida Loo Doorto Bixiye Dhoofiye Sare ah
Sidee loo Maareyn Karaa Dhibaatooyinkaaga Dhanka Forex
Sida Loo Helo Badankooda Nidaamka Ganacsi Lacageed ee Suuqa
Sida loo doorto Ganacsi Lacageed ee Ganacsi ee Forex Trading
Sidee u shaqaysaa ganacsiga Forex News Trading?
Talooyin Wanaagsan For Forex Trading Profit
Qiimaha Ganacsi Lacageed, Saacadkee Loo Baahan Yahay Inay Diyaar U Tahay?
Soo-dejinta Tilmaamaha ugu fiican ee MT4
Xiisadda dhabta ee Forex Range
Xiisadaha dhabta ah ee Forex ... [Akhri wax dheeraad ah...]
Qiimaha Bandhigga Bixinta Saamiga Lacagta
Qiimaha Bixinta Lacagta ... [Akhri wax dheeraad ah...]
Shaxda Forex Turbo JRSX
Forex Turbo JRSX ... [Akhri wax dheeraad ah...]
Dhibaatada Dhibaatada Jirta ee Dhibaatada Jirta
Dhibaatooyinka kala duwan ee suuqa kala iibsiga ... [Akhri wax dheeraad ah...]
Forex Super AVG Tilmaamaha Saxda ah
Forex Super AVG Stochastic ... [Akhri wax dheeraad ah...]
Tilmaamaha Dhexdhexaadinta ee Forex Cauchy
Canshuurta Ganacsiga ... [Akhri wax dheeraad ah...]
Tilmaamaha Sicirada Sarrifka ee Socdaalka ah ee Forex
Hantidhawrka Isbeddelka ee Forex ... [Akhri wax dheeraad ah...]
Tilmaamaha Forex Jey TPO
Tilmaamaha Forex Jey TPO [Akhri wax dheeraad ah...]
Nidaamka Ganacsi Lacageed ee ugu Fiican
Nidaamka Ganacsiga ee Forex Quantum Gomega
Shirkadda Forex Quantum Gomega Trading ... [Akhri wax dheeraad ah...]
Nidaamka Ganacsiga Ganacsiga ee Forex Red
Ganacsiga Forex Casriga ah ... [Akhri wax dheeraad ah...]
Nidaamka ganacsiga ee 2
Lacagta loo yaqaan "Forex Loophole Version" 2 ... [Akhri wax dheeraad ah...]
Tilmaamaha Arxiga Sicirada ah
Forex Custom Aroon ... [Akhri wax dheeraad ah...]
Waxyaabaha aasaasiga ah ee ganacsiga Forex
Maalgashadaha ganacsiga ee Forex ayaa ku tiirsan ... [Akhri wax dheeraad ah...]
Forex Histogram Istaraatijiyad Beddel MACD
Xawaaladaha Macaamiisha [Akhri wax dheeraad ah...]
Istaraatijiyada Istaraatiijiyada ee Forex TrendLine
Hantida Forex TrendLine ... [Akhri wax dheeraad ah...]
Istaraatijiyada Hirgelinta Xiisadda Forex
Xiisadda Socdaalka ee Forex ... [Akhri wax dheeraad ah...]
Istaraatijiyadaha ugu xun ee bilaashka ah
Istaraatiijiyada Ganacsi ee Forex Box Fibonacci
Forex Box Fibonacci Breakout ... [Akhri wax dheeraad ah...]
Istaraatiijiyada Ganacsiga ee Ganacsi ee "Forex Channel"
Hantida lacagta ee Forex [Akhri wax dheeraad ah...]
Istaraatiijiyada Ganacsi ee Ganacsi ee Ganacsiga ah
Farshaxanada Dhexdhexaadka ah [Akhri wax dheeraad ah...]
Istaraatijiyada Ganacsi ee Forex H1
Hantida Horsada H1 Hagaha ... [Akhri wax dheeraad ah...]
Istaraatiijiyada Ganacsi ee Ganacsiga ah ee Dhexdhexaadinta Xawaaladaha
Shirkadda Forex ee Super CCI Breakout ... [Akhri wax dheeraad ah...]
Istaraatiijiyada Ganacsi ee Xawaaladaha oo loo yaqaan 'Forex Phases Zone'
Wareega Fikradaha Wareegga ... [Akhri wax dheeraad ah...]
tilmaam sare tilmaamaha adx Tilmaamaha digniinta tilmaame arrow calaamad muujinaysa tilmaame bar tilmaame mt4 ugu fiican calaamadaha kabaha iibso tusaha iibka tilmaame shamac tilmaame caaq tilmaame channel Tilmaamaha darajada tilmaame caan ah tilmaame dashboard calaamadda ganacsiga maalintii tusaha tilmaamaha tilmaame dhibic tilmaame fibonacci tilmaam jabka tilmaame bilaash ah tilmaame bilaash ah muujinaya mt4 bilaash ah tilmaame histogaraam Tilmaamaha Ichimoku tusaha macluumaadka tusaha heerka line tilmaame tilmaame macaan calaamadda 4 metatrader Tilmaame xawliga tilmaame celinta celceliska Tusaha mt4 tilmaame mtf tilmaame oscillator ah tusaha dhibcaha miisaanka tusaha qiimaha Tilmaame-celinta muujiyaha rsi calaamadda madaxa tusaha tilmaamaha tilmaamaha stochastic tilmaame super Tilmaamaha isbeddelka tusaha mugga
Kala Soo Bilaash Bilaashka Ganacsiga ee Kalluunka ah
Download Free Forex Kaufman Iibso Tilmaamaha Qadarka!